David McIninch Maqaallo ku saabsan Martech Zone |
Maqaallada by David Mcininch
David ayaa lagula xisaabtamayaa dhammaan dhinacyada wareegga dakhliga helid; Suuqgeynta, Iibka, Horumarinta Ganacsiga, Maareynta Xisaabaadka iyo Guusha Macaamiisha. Acquisio waa shirkad caalami ah oo horseed u ah xalalka suuq geynta dijitaalka ah ee qurxoon taas oo u oggolaanaysa wakaaladaha iyo xayeysiiyayaashu in ay soo bandhigaan waxqabadyo olole oo aad u ballaaran.
Sidee Barashada Mashiinka iyo Acquisio u kobcin doonaan ganacsigaaga
Talaado, July 5, 2016 David Mcininch
Intii lagu gudajiray kacaankii warshadaha bani'aadamku wuxuu u dhaqmay sida qaybo mashiin, oo la dhigay hareeraha safafka, iskuday inuu naftiisa uga shaqeeyo sida ugu macquulsan uguna macquulsan. Markii aan soo galnay waxa hadda loogu yeero "Kacaankii Warshadaha ee 4aad" waxaan aqbalnay in mashiinnadu ay aad uga fiican yihiin ka farsameynta dadka. Dunida mashquulka badan ee xayeysiinta raadinta, halkaasoo maareeyayaasha ololuhu isku dheelitiraan waqtigooda inta udhaxeysa hal-abuurka ololeynta, iyo farsamo ahaan u maareeyaan ugana cusbooneysiiyaan